Abwaan Jiheeye: Dhallinyarada wa la tusay inay qabyaalad ku kala taageeraan kooxaha | Berberanews.com
Home Fanka iyo Sugaanta Abwaan Jiheeye: Dhallinyarada wa la tusay inay qabyaalad ku kala taageeraan kooxaha
Abwaan Jiheeye: Dhallinyarada wa la tusay inay qabyaalad ku kala taageeraan kooxaha
Hargeysa-(Berberanews)-Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi (Ismaaciil Jiheeye) oo ka mid ah Bahda Abwaannada Somaliland, ayaa masuulliyiinta Dawladda ku eedeeyay inay iyagu horseed ka yihiin qabyaaladda la dhex dhigay tartankii Gobollada Somaliland.
Abwaan Jiheeye waxa uu ku eedeeyay masuulliyiinta dawladdu inay hormood ka ahaayeen kala fogaynta dhallinyarada iyo qabyaallada, isaggoo arrintaa ka hadlaya waxa uu yidhi, “Macnaha ciyaaruhu waa u
Isdhexgal, sharaf iyo farxad, laakiin ciyaarihii gobollada ciyaaro qabyaaladeed baa laga dhigay. Cidda ugu badan een eeddaas dhakada ka saarayaa waxa weeye, masuulliyiinta dawladda, ayaa mid waliba gobolkiisii taageeray; oo gobolkiisii casuumay, hada waa kuwii ummadda u dhexeeyay ee wasiirradii xilka u wada siday.
Arrintaasi waxay keentay in dhallinyaradii qabyaalladii madaxdooda ay ka arkayeen ay gasho. “
Abwaan Jiheeye oo hadalkiisa sii wataa waxaa uu yidhi, “Dabadeedna, geela aarankiisii durduriyay duqiisa maxaad u malayn? Inta inagoo masuula dhallinyarada wax u bilowno ayaynu hadana diidayna wixii aynu u bilownay inaan dhalliyaradii inagaga dayan.
Dhallinyarada wa la tusay inay qabyaalad ku kala taageeraan kooxaha, waxaasina wa fiican may ahayn.”
Abwaan Jiheeye oo goobjoog ka ahaa ciyaartii rabshaduhu ka dhasheen ee Daadmadheedh iyo Hawd, waxa uu ka maragfuray wixii uu goog joog ka ahaa, isagoo dhalliilana u soo jeediyay Madaxweynaha Somaliland iyo qaar ka mif ah ciyaartoygii labada gobol iyo masuulliyiin uu ka mid yahay Maayarka Hargeysa.
Halkan ka daawo muuqaalka shir jaraaid oo Abwaanku maanta ku qabtay Hargeysa.
Previous articleMadaxweyne Biixi oo Tacsi u diray qoyskaMarxuum Cali Ibraahim Sii-arag
Next articleHoggaamiyaha Tigreegay oo qiray inay weerareen Eritrea